Global Voices teny Malagasy » Tonga ao Maraoka ny “Diaben’ireo vehivavy ratsy fitondrantena” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Janoary 2019 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika (fr) i Claire Ulrich, imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Septambra 2011)
“Miarova tena samirery, takio ny fanajàna. Tsy maintsy miova lasy ny henatra !” io no hiakam-pitoloman'i Majdoline Lyazidi, tovovavy iray 20 taona namorona ny SlutWalk Maroc , pejy Facebook natokany hanairana ny saina amin'ireo fanorisorenana ara-nofo ao anatin'ny fiarahamonina maraokanina. Toa tafita ny hafatra: mpikambana telo arivo no efa ao anatiny hatramin'ny nanombohana azy, tsy ampy 15 andro akory.
Ny 3 Aprily 2011 tao Toronto , Kanadà no nanomboka ny ‘”Diaben'ireo vehivavy ratsy fitondrantena “, ho toy ny hetsika iray hanoherana ireo manome rariny ny fanolanana ho toy ny natosiky ny fitafy anaovan'ireo vehivavy voaolana. Fanambaràna iray niteraka resabe nataonà manamboninahitra iray tao amin'ny polisy no niaingàn'ny zavatra rehetra, izay niteny teo anoloan'ireo tovovavy mpianatra hoe mba hiarovana ny tena manoloana ireo mpanolana dia “tokony hosorohan'ireo tovovavy ny fanaovana fitafy toy ny vehivavy ratsy fitondrantena”. Vetivety ilay hetsika dia niparitaka eran'izao tontolo izao, niaraka tamin'ireo diabe sy fihetsiketsehana nokarakaraina tao Sidney, Londona.
“Fanajàna” – sary an'ny pejy Facebook SlutWalk Maroc
Hatreto, tsy tena mbola tafiditra ao anatin'ny tontolo arabo ity fomba fanoherana ity. Ny sasany manakiana azy noho izy naorina avy amin'ny fisainana tandrefana. – Ny hafa manazava io tsy fahalinana io ho noho ity faritra iray eto an-tany ity mitolona, amin'izao fotoana izao, mba hisianà fiovàna midadasika kokoa. Saingy, toa an'i Majdoline, mbola eo ireo mihevitra fa ny tena fiovàna dia tsy maintsy mampiaty ny tolona manohitra ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny fomba fitondran'ny fiarahamonina azy ireny.
Tao anaty antsafa iray niarahana tamin'ilay Maraokàna bilaogera iray hafa, Hind , manazava izay antony manosika azy hanao izany i Majdoline :
Ho ahy [Ny hetsika Diaben'ireo Vehivavy Ratsy Fitondrantena] dia fandraisana fahatsiarovantena. Teny am-pitomboana teny, tena tsy takatro velively ny antony nanohizan'ny fiarahamonina hanefy ny toetsaintsika hoe “Mitandrema ianao tsy ho voaolana” fa tsy hoe “Tsy hanolana ianao”, izay mampifàka lalina ny dingana iray tsy misy farany mankamin'ny fanamelohan-tena ataon'ilay niharany, miaraka amin'ny hoe “Raharaha notadiavina ny azy”.
Heveriko fa fotoana izao hanovàna io toetsaina io, mila omentsika vintana ny taranaka hoavy mba ho afaka mizotra eny an-dalambe ao anaty fahatsapàna fa VOAARO sy HAJAINA, izay tsy iainan'ny vehivavy maraokàna aloha amin'izao fotoana izao.
Majdoline manaiky  ihany koa fa mametraka olana ny anarana entin'ilay fanentanana :
Ny tiana hatao dia mba ho dika maraokàna amin'ny Slutwalks izy io, ary mba ho maraokàna 100 isanjato ihany koa, mba hifanaraka amin'ny kolontsaina sy ny soatoavina ao anatin'ny fiarahamonintsika. Saingy mba hilazàko ny marina, tena sarotra ny mahita anarana tena mahasarika mihoatra noho ny “SlutWalk”!
Ankehitriny, miaraka miasa aminà namana ny mpanorina ilay vondrona, namana lahy sy vavy, mba hampiroboroboana ilay hevitra. Nanambara ny hanovàna tsy ho ela ny anaran'ilay vondrona ry zareo. Hita ao anatin'ireo tolotra ho anarana ny hoe WomenShoufoush, kilalaonteny amin'ny teny arabo milaza fambaboana fo, saingy afaka koa adika ho toy ny antso hamaha olana iray.
Miabo ny ankamaroan'ireo fanehoankevitra momba ny vondrona SlutWalk Maroc, saingy misy ihany kiana vitsivitsy. Nanafintohina ilay bilaogera Youssef Boukhouya ny nanombohana ilay vondrona tao anatin'ny volana Ramadàny. Manoratra izy  :
Ao anatin'ny volana masina Ramadàny no mipoitra ity vondrom-piarahamonina kely ity, izay maneho tsy fanajàna ny Maraokàna, ary mba hamirapiratra amin'ny hadalàna ankoatry ny tsy fetezan'ny fisafidianan-dry zareo ny fotoana, dia ohatra iray tena ratsy indrindra no noraisin-dry zareo mba hanehoana ny lazainy fa eritreritra tsara ananany miaraka amin'ilay « hetsika SlutWalk » na Diaben'ny Vehivavy Ratsy Fitondrantena tsotra izao ! dia saino anie hoe andian-tovovavy maro miboridana mitanjozotra eny an'arabe, dia hilaza amintsika fa ho amin-javatra tsara no itolomana… Oh, TSINONTSINONA IZANY, tsy misy afa-tsy izay ! ary zavatra iray hitako manokana ho mahatsiravina sy tsy azo ekena!
Etsy ankilany, manontany tena ny vondrona Moroccans For Change (Maraokàna ho an'ny fanovàna) momba ny tombony azo amin'ny fanafàrana lasitra tandrefana tonga dia vonona mba ho entina manao fanoherana. Hoy ry zareo :
Iombonan'ny sasany aminay hevitra ny fanaovana dika maraokàna ny Diaben'ny Vehivavy Ratsy Fitondrantena. Toherinay ny herisetra atao amin'ny vehivavy, kanefa, manontany tena izahay momba ity fikatrohana nalaina an-jambany avy any ananona any ity. Mazava ho azy fa “Rehefa tsa, dia tsia”. Saingy misy idiran'i Maraoka ve ny resaka Diaben'ny Vehivavy Ratsy Fitondrantena ?
Anisan'ireo manohana ny SlutWalk Morocco, ny bilaogera Mahmoud Khattab izay manazava  ny antony anekeny azy io :
Ho ahy manokana, manohana ilay hetsika aho, resaka faharesendahatra, ary noho ny tahotra. Matahotra aho ho an'ny reniko, ireo anabaviko, ireo nenitoa sy nenifara, ny renibeko […], ary koa manohana aho satria misy tsirim-panantenana hitako, na dia kely aza, mendrika ny hotohanana, hisianà fiarahamonina iray manaja marina ny vehivavy, ireo vehivavintsika, ny vehivavinareo.
Tao anaty antsafa iray ho an'ny gazety maraokàna,  milaza i Majdouline fa hijanona ho tsy miankina ny vondrona misy azy, saingy hisy ny fifandraisana hatao amin'ireo fikambanana mpiaro vehivavy sy ireo fikambanana izay miaro ny zo maha-olona mba hampandraisana anjara azy ireny amin'ilay diabe voalohany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/16/132540/
 SlutWalk Maroc: https://www.facebook.com/pages/SlutWalk-Morocco/132681343491773?sk=info
 Diaben'ireo vehivavy ratsy fitondrantena: https://fr.globalvoicesonline.org/?s=marche+des+salopes
 Manoratra izy: http://blog.benkhouya.com/slutwalk-morocco.html
 Hoy ry zareo : http://moroccansforchange.com/2011/08/19/slutwalk-morocco-or-moroccan-feminism-gone-berserk/
 ho an'ny gazety maraokàna,: http://www.lesoir-echos.com/2011/08/24/%C2%AB%E2%80%89marcher-contre-le-harcelement%E2%80%89%C2%BB/